Paul Scholes Oo Magacaabay Laacibkii Sababta U Ahaa Guul-darradii Soo Gaadhay Manchester United - Gool24.Net
Paul Scholes Oo Magacaabay Laacibkii Sababta U Ahaa Guul-darradii Soo Gaadhay Manchester United
Halyeygii Manchester United ee Paul Scholes ayaa rumaysan in kooxdiisa hore ay u baahan tahay inay beddesho Victor Lindelof oo uu ku eedeeyey inuu sabab u ahaa guul-darradii Red Devils kasoo gaadhay kulankii Sevilla ay kaga reebtay tartanka Europa League.
Lindelof ayaa lagu eedeeyey inuu khalad ku lahaa goolka labaad ee laga dhaliyey Manchester United, laakiin waxa isaguna qaybtiisa lahaa Aaron Wan-Bissaka oo xakamayn kari waayay De Jong oo ciyaarta ka dhigay 2-1.
Paul Scholes ayaa ku eedeeyey Lindelof in tayadiisu ka hoosayso middii looga baahnaa difaacyahannada Manchester United, waxaanu hoosta ka xariiqay in kooxdu u baahan tahay inay beddelkiisa hesho inta uu furan yahay suuqa iibka ee xagaagan, ayna soo qaataan laacib kale oo ay isla jaan-qaadi karaan Harry Maguire.
“In Manchester United ay si weyn ugu qalmaysay inay guuleysato, shaki kuma jiro, waxay ahaayeen kooxda wanaagsan, goolka labaadna waa inaynu sheegno in difaacu qayb ka ahaa naxdintaas.” Ayuu yidhi Paul Scholes oo intaas ku daray: “Lindelof iyo Harry Maguire, labaduba waxay kasoo baxeen birta u dhow, waxaana joogay weeraryahan. Waxay ahayd in Lindelof uu arko. Kaddibna uu Wan-Bissaka soo buuxiyo booskiisa haddii aanu u malaynayn inuu arkayo.”
Paul Scholes waxa uu intaas kaddib shaaciyey in dhibaatada ugu weyn ee Manchester United haysata uu yahay Lindelof, waxaanu yidhi: “Qalad ayaa jiray goolkaas. Waxa lagu eedayn karaa afarta difaaca oo dhan. Brandon Williams kubadda ma helin, halkee ayuu Maguire joogay, ma garanayo anigu. Laakiin dhibaatada ugu weyni waa Lindelof.”